China DIAMOND Commercial HVLS Ceiling Fan Manufacture sy Factory | Kale
KALE Ofisialy 2.4m 3m 3.6m Silent HVLS Varavarana lehibe
DIAMOND valin-drihana mpankafy dia be mpampiasa amin'ny toerana ara-barotra toy ny toby fiantsonan'ny, toeram-ponenana, trano fisotroana kafe sy ny gymnasium. Ny fantson-drivotra lehibe mitahiry angovo miaraka amin'ny maotera PMSM, mahomby kokoa, mangina kokoa ary mahomby kokoa.
Ny mpankafy valin-drihana KALE Diamond Series dia mpankafy mitsitsy angovo be dia be, afaka manosika rivotra be dia be izy hiakatra hatramin'ny 3730m3/min, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha manomboka amin'ny 80RPM ka hatramin'ny 120RPM. Any amin'ny toerana malalaka dia afaka mandrakotra velarantany mihoatra ny 400 metatra toradroa miaraka amin'ny herin'ny 0.4KW na latsaka.
Raha ampitahaina amin'ny mpankafy kely nentim-paharazana sy ny air conditioners, Diamond Series KALE FANS dia manana tombony tsy manam-paharoa toy ny: endrika mahafinaritra, mitsitsy angovo, tontolo iainana, fandrakofana faritra midadasika, fahatsapana aina, sns.
Diamond Series KALE FANS dia ampiasaina indrindra amin'ny sehatra ara-barotra toy ny gym, kianja, klioba ara-batana, trano fisakafoanana sns.
Ny endrika ankapobeny dia avy amin'ny fikarohana an-taonany maro ary mamokatra traikefa tsara indrindra amin'ny rivotra voajanahary. Malemy ny hafainganan'ny rivotra raha mandrakotra faritra midadasika. Amin'ny fampiharana azo ampiharina, ny olona dia afaka mahatsapa ny fihenan'ny mari-pana 5 hatramin'ny 8 degre. Ny herin'ny mpankafy dia 0.4KW ihany. Ny vokatra dia kanto, mateza ary tsy misy fikojakojana ary miaraka amin'izay koa manome rivotra tsara sy mangatsiaka.
1. Fitaovana elektrika Schneider, miaraka amin'ny maody fiarovana fiarovana ao anatiny izay hanapaka ho azy ny famoahana raha misy loza.
2. Japoney marika YASKAWA VFD Intelligent Control Module
MODELY SHVLS-D8BAA42 SHVLS-D8BAA36 SHVLS-D8BAA30 Ampahany SHVLS-D8BAA24
Size 14ft (4,2m) 12ft (3.6m) 10ft (3.0m) 8ft (2.4m)
Haben'ny rivotra max 7550m³/min 6560m³/min 5530m³/min 4550m³/min
Max Speed 80 RPM 90 RPM 100 RPM 120 RPM
Weight Body 41KG 38KG 35KG 31KG
fahefana 0.4KW 0.4KW 0.3KW 0.15KW
Voltage fampidirana 220V/1P 220V/1P 220V/1P 220V/1P
Ambaratonga tabataba 39dB (A) 39dB (A) 40dB (A) 41dB (A)
Soso-kevitra Haavo fametrahana 5.5->7.0m 4.8->5.5m 4.0->4.8m 3.5->4.0m
teo aloha: AIRCOOL Commercial Ceiling Fan / Cooling Fan
Manaraka: AEOLUS Industrial HVLS Ceiling Fan